विवेकशीलको प्रश्न– राष्ट्रियसभामा बामदेवको आवश्यकता किन प¥यो ? » देशपाटी
विवेकशीलको प्रश्न– राष्ट्रियसभामा बामदेवको आवश्यकता किन प¥यो ?
२३ भदौ, काठमाडौं । विवेकशील नेपाली दलले नेकपा उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा नलैजान सरकारलाई आग्रह गरेको छ । साथै राष्ट्रियसभामा तीन सदस्य मनोनयन गर्ने संवैधानिक व्यवस्थाको मर्म र भावनाबारे विचार गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई विवेकशील नेपाली दलले ध्यानाकर्षणसमेत गराएको छ ।